सभापतिमा विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारी विल्कुलै औचित्यपूर्ण छ : कर्ण मल्ल « AayoMail
सभापतिमा विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारी विल्कुलै औचित्यपूर्ण छ : कर्ण मल्ल
2021,31 August, 9:33 am
देशको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। घोषित कार्यतालिकाअनुसार भदौ १८ गते वडा अधिवेशन गरेर महाधिवेशन प्रक्रिया सुरू गर्ने कांग्रेसको तयारी छ।
अब पार्टीको सभापतिमा दाबी गर्दै वर्तमान उसभापति विमलेन्द्र निधिले भव्य सम्पर्क कार्यालय खोलिसकेका छन्। सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवाका गृह जिल्ला डडेलधुराका सभापति कर्णबहादुर मल्ललाई मञ्चमा उभ्याएर निधिले महाधिवेशन अभियानको थालनी गरे।
निधिको कार्यक्रममा मल्लको उपस्थितिले कांग्रेसभित्र तरंग ल्याएको छ। डडेलधुराका सभापति मल्लसँग आयोमेलका धैर्यकान्त दत्तले गरेको कुराकानीः
तपाईं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको सभापति हुनुहुन्छ। अस्ति उपसभापति विमलेन्द्र निधिको सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा कसरी पुग्नुभयो?
विमलेन्द्र निधि गैरकांग्रेस होइन नि! उहाँ नेपाली कांग्रेसको उपसभापति हुनुहुन्छ। स्वयं अहिलेको सभापतिजी जुन टिमबाट १३ औं महाधिवेशनमा सभापति हुनुभयो त्यसको लामो समयसम्म उहाँ सहयोद्धा र सहयात्री भएर काम गरेको नेता हुनुहुन्छ। १४ औं महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर काठमाडौंमा उहाँले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोल्ने अवसरमा म काठमाडौंमै भएकोबेला म जस्ता साथीभाइ कार्यकर्ताहरूलाई लेखेर, मेसेज गरेर र फोन गरेर कार्यक्रममा आउन निमन्त्रणा दिनुहुन्छ भने त्यहाँ जान कुनै पनि संस्कारयुक्त कांग्रेसका लागि अनउपयुक्त हुँदैन जस्तो मलाई लागेको छ।
अर्को कुरा के हो भने हिजो शेरबहादुर दाइलाई सभापति बनाउन म आफैं पनि कांग्रेसको कार्यकर्ता र यो टिमको कार्यकर्ताको हैसियतले लामो समयसम्म उहाँहरूसँग मिलेर काम गरेको छु। त्यो कारणले उहाँ जस्तो नेताले म जत्तिको कार्यकर्तालाई कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि बोलाउनु र दुई शब्द शुभेच्छा व्यक्त गर्नु संस्कारयुक्त कांग्रेसको कार्यकर्ताले गर्नुपर्ने कर्तव्यभित्रै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
एउटै टिमका शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधिले १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिको दाबेदारी गरेपछि दुई नेताको लामो सहकार्य टुट्ने सम्भावना कतिको देख्नुभएको छ?
त्यो कुरा उहाँ दुईजना नेताहरूले भन्ने कुरा हो। तपाईंले शेरबहादुर दाइ र विमलेन्द्र दाइकै कुरा गर्नुभयो भने पार्टीभित्र शेरबहादुर दाइपछिको नेता विमलेन्द्र दाइ हुनुहुन्छ। टिमभित्र पनि शेरबहादुर दाइपछिको नेता उहाँ नै हुनुहुन्छ। २० वर्ष त मैले संगत गरेँ। टीमको नेतामा पनि सेकेन्ड पोजिसनमै हुनुहुन्छ। अर्को चाखलाग्दो कुरा के हो भने जुन टिमबाट जुन विचार समूहबाट शेरबहादुर दाइ १३ औं महाधिवेशनमा सभापति हुनुभयो त्यसको फाउन्डर त्यसको परिकल्पनाकार र त्यसको रणनीतिकार हुनुहुन्छ विमलेन्द्र निधि। किनभने यो अभियान ९ औं महाधिवेशनमा गणेशमानजी र किसुनजीको नामबाट चिरञ्जिवी बाग्लेलाई गिरिजाबाबुसँग चाहिँ केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सार्ने एउटा महत्वपूर्ण नेताको रूपमा हुनुहन्थ्यो विमलेन्द्र निधि।
त्यसै जगलाई टेकेर १० औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर दाइलाई सभापतिका लागि अगाडि बढाएको थियो यो टिमले। २०५३ बाट सुरू भएको थियो ९ औं महाधिवेशनको अभियान। म त्यतिखेर पनि यो अभियानमा उहाँहरूसँगै थिएँ। ९ औं महाधिवेशनमा म सबैभन्दा कान्छो महाधिवेशन प्रतिनिधि थिएँ। त्यतिखेर चिरञ्जिवी बाग्ले चुनाव लड्दा महाकाली क्षेत्रबाट उहाँको प्रतिनिधि बसेको छु, उहाँको प्रस्तावक बसेको छु। त्यसै विचार समूहबाट १० औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर दाइले नेतृत्व गर्नुभयो, नेताहरू सबैले सल्लाह गरेर। १३ औं महाधिवेशनसम्म त्यही विचार समूहसँग आवद्ध भएर उहाँलाई सहयोग गरेको छु।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्न ९ औं महाधिवेशनमा किसनुजी र गणेशमानजीको नामबाट एउटा विचार समूह बनेको थियो। त्यसमा शेरबहादुर दाइ र विमलेन्द्र दाइको प्रमुख भूमिका रह्यो। अब १४ औं महाधिवेशनमा त्यही विचार समूह बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ वा अलग भएर त्यो उहाँहरूको विषय हो।
तर, भोलि स्वयं शेरबहादुर देउवा हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय सभापति मुलुकको प्रधानमन्त्री उहाँले पार्टीको केन्द्रीय सभापतिमा १४ औं महाधिवेशनमा पनि सभापतिको उम्मेदवारी दिने औपचारिक कार्यक्रममा उहाँले मलाई बोलाउँदा म नजाँदा त्यतिखेर तपाईंहरूले प्रतिप्रश्न गर्न मिल्छ।
म पार्टीको जिल्ला सभापति जुन विचार समूहको हिसाबले २०५० माघ २८ गतेदेखि जोडिएको छु। २०५० साल माघ २५ गते काठमाडौंमा उपनिर्वाचन थियो। किसनुजी हार्नुभयो, हराइयो उहाँलाई। त्यसपछि २८ गतेदेखि म यो विचार समूहसँग जोडिएको छु। जुन विचार समूहको प्रतिनिधित्व गरेर १३ औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा अहिलेको सम्मानीय प्रधानमन्त्री त्यो विचार समूहको २०५० माघ २८ गतेका दिन २०-२१ जनामात्रै विद्यार्थी नेताहरू थिए जसमध्येका एक दर्जनभन्दा बढी त उहाँकै टिमबाट १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित हुनुहुन्छ। तर, म त्यो विचार समूहबाट कहिँ पनि अविचलित भएको छैन।
किनभने त्यो विचार समूह पार्टीभित्रको एउटा धारको संस्थापक सदस्य हुँ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब १४ औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर दाइ चुनाव लड्नुहुन्छ कि लड्नु हुँदैन। लड्नुभयो भने कसरी आफ्ना साथीभाइहरूलाई मिलाउनु हुन्छ। विमलदाइलाई साथमा राखेर लैजानुहुन्छ कि लैजानु हुँदैन। विमलदाइको आसय अस्ति पनि बुझ्दा उहाँ शेरबहादुर दाइ र रामचन्द्र दाइको सहयोग लिएर सभापति हुने महत्वाकांक्षासहित उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ।
व्यक्तिगत रूपमा भेट्दा पनि शेरबहादुर दाइ र रामचन्द्र दाइ दुवैको सहयोगबाट सभापति हुनचाहन्छु भन्नुभएको छ। त्यसकारण त्यो नेताहरूको कुरा हो, उहाँहरूले कुन ढंगले लिनुहुन्छ उहँहरूले बुझ्ने हो।
मेरो गुटकै कुरा गर्नुहुन्छ भने १२ औं वा १३ औंमा मेरा कार्यकर्ताको जुन गुट हो मेरो पनि त्यही हो। र, १४ औं मा पनि मेरो डडेलधुराका साथीहरूले मलाई जे निर्देशित गर्नुहुन्छ म त्यही गुटमा उभिन्छु। तर, सिद्धान्ततः नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा नेपाललाई धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र बनाउने एजेन्डासहित सभापतिमा जसको उम्मेदवारी आउँछ म निर्धक्क भएर तन मन वचनले उहाँको पक्षमा उभिन्छु।
शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधि एउटै टिमबाट दुईजना उम्मेदवार बन्दा तपाईंहरूको विचार समूह कमजोर होला जस्तो लागेको छैन?
त्यो मैले आंकलन गर्ने कुरा भएन। त्यो तपाईंहरू आफैं आंकलन गर्नुस्। सँगै बस्दा निश्चित रूपले बलियो भइन्छ। अलग–अलग हुँदा दुवैजना कमजोर हुने निश्चित नै हो।
शेरबहादुर देउवाले १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि आफूलाई नै सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर विमलेन्द्र निधिले दाबी गरिरहनुभएको छ। टिमको नेताको रूपमा यसबारे तपाईं बढी स्पष्ट हुनुहुन्छ होला। वास्तविकता के हो?
मैले पनि ठ्याक्कै यही कुरा सुनेको छु। विमलदाइले त्यही कुरामा दाबी गरिरहनुभएको छ तर शेरबहादुर दाइ त्यो होइन भनिरहनुभएको छ।
अन्त्यमा पुगेर शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधि मिल्छन् भने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। त्यसको सम्भावना तपाईंले कति देख्नुभएको छ?
शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट देशको अन्तिम प्रधानमन्त्री हुनेछन भनेर ठोकुवा गर्ने प्रचण्ड हुनुहुन्छ। तर, प्रचण्डकै प्रस्तावमा आज उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँसँगै अरू तीनजना झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि प्रस्तावक बन्नुभएको थियो। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा त केही पनि हुँदैन।
किन शेरबहादुर र विमल दाइको मात्रै कुरा गर्ने? रामचन्द्र दाइ, शेरबहादुर दाइ र विमलेन्द्र दाइ मिलेर नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनलाई सर्वसम्मत ढंगले सम्पन्न गर्ने वातावरण पनि हुनसक्छ नि। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरे सबैले मान्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ नि। किनभने हिजो अस्तिमात्रै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भन्नुभएको छ चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भनेर। मंसिरसम्म वडादेखि केन्द्रसम्म मारामार गरेर महाधिवेशनमा जाने। अनि चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि जिताउने अवस्था गाह्रो हुनसक्छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर हाम्रो पार्टीका सभापति र श्रद्धेय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र दाइले समझदारी बनाएर त्योभन्दा दोस्रो पुस्ताका नेता जस्तै विमल दाइ, प्रकाशमान दाइ, शशांक दाइ, शेखर दाइ सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर सर्वसम्मतको अधिवेशन बनाउन पहल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु।
वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि दोहिरिने कुरा गरिरहँदा एउटै टिमबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारी कति औचित्यपूर्ण छ?
विमलेन्द्र दाइको उम्मेदवारी विल्कुलै औचित्यपूर्ण छ। उहाँ नेविसंघको राष्ट्रिय सभापति भएदेखि अहिलेसम्म आउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री भइसक्नुभएको छ। सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ। मधेशमा कांग्रेसको खस्किदो अवस्थालाई देखेर उहाँको उम्मेदवारी औचित्यपूर्ण छ।
कांग्रेसको आधारभूमि मधेशमा कांग्रेस निकै कमजोर भएको छ। सभापतिमा विमलेन्द्र निधि आउँदा मधेशमा कांग्रेस फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने सम्भावना हेर्नुभएको छ?
२०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपालको राष्ट्रपति को भए? डा.रामवरण यादव। २०६४ मा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा नतिजा कस्तो थियो? मधेशको त्यो आंकडा हेर्नुस्। र, मधेशमा जन्मेको नेपाली नागरिक रामवरण यादवलाई नेपाली कांग्रेसले मुलुकको राष्ट्रपति बनाइसकेपछि २०७० को निर्वाचनको परिणामको तुलना गर्नुस्। २०६४ मा नेपाली कांग्रेसले पाएको मत र २०७० मा पाएको मतलाई गणितीय रूपमा तुलना गर्नुस् र यदि १४ औं महाधिवेशनमा उहाँ सभापति बनेर आउनुभयो भने कांग्रेसको पोजिसन के हुन्छ त्यसको उत्तर त्यहाँबाट खोज्न सकिन्छ। मधेशमा कांग्रेस फेरि बलियो हुनसक्छ। उहाँले पहाड र हिमाललाई पनि कहिल्यै ‘इग्नोर’ गर्नुभएको छैन। मधेश, हिमाल र पहाड जोड्ने क्षमता उहाँको क्षमता छ। विमलेन्द्र निधिले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दा उहाँ पहाडीमूलको नेता हो नि।
राजनीति सम्भावनाको खेल हो जे पनि हुनसक्छ। भुइँतहको एउटा कार्यकर्ताको नजरबाट हेर्दा कम्तिमा तीन तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दा म अझ पनि नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सर्वसम्मत ढंगबाट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सर्वसम्मत ढंगबाट महाधिवेशन हुँदा नेताहरूको व्यक्तित्वमाथि थप श्रद्धा बढ्छ र तीनै तहमा कांग्रेसले निर्वाचन जित्नसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ।